Efa raikitra izy ity… | NewsMada
Mety sa tsy mety amin’ny Malagasy ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia ? Tsy fanontaniana tokony hipetraka izao intsony izany. Efa raikitra izy ity… Miandry amin’ny faran’ny herinandro indray izay mbola te hamaly izany.
Maro ny nitsivalana, maro ny nanakiana sy naneho tsy fankasitrahana ny fandraisana ity fihaonana an-tampony ity. Angamba, raha tsy fohy ny fitadidiana, ity no hetsika iraisam-pirenena noraisin’i Madagasikara, maro tsy mpankasitraka indrindra. Manginy fotsiny ny tsaho sy ny honohono, nahazo vahana noho ny tsy fahampian’ny serasera avy amin’ny mpitondra sy ny mpikarakara.
Fa efa io izy. Efa tonga tsikelikely ny vahiny, ary nanokatra izany ny andriamanjaka maraokanina. Nanapatra ny maha andriamanjaka azy izy, ka fiaramanidina marobe no nitondra ny delegasiona sy ny entana nentiny. Te hanamarika, fa misy fifanakaikezana amin’ny Malagasy ny Maraokanina…
Ho avy koa, raha tsy misy ny fiovana, ny “goavana” isany. Minisitra maro, filoham-pirenena vitsivitsy ary mpanao gazety iraisam-pirenena. Izany kosa ve, tsy mendrika ny homena ny hajany amin’ny maha vahiny azy? Saingy vokatry ny tsy fitiavana ny fitondrana sy ny mpitondra hatrany, toa vao mainka mahatonga fahasorenana ho an’ny maro ny “fanafenana” ny loto sy ny fanadiovana maimaika.
Kanefa efa raikitra ity e! Mitodika amin’i Madagasikara ny mason’ny firenena maro, fara faharatsiny ireo mampiasa ny teny frantsay. Hahavita ny fanamby? Resaka hafa iny. Hisy tombontsoa goavana sy azo tsapain-tanana ve aoriana, mahakasika ny toekarena, sosialy ary politika iraisam-pirenena?
Na mpanohitra na mpitondra, angamba tsy misy maniry ratsy ho an’i Madagasikara. Raha mitafy henatra, tompon’andraikitra voalohany ny mpitondra. Tsy izy ireo ihany anefa no ho afa-baraka. Raha misy ny tombontsoa, miara-misitraka izany ihany koa, na dia zarain’ny hevitra samihafa aza. Rehefa an-koditra ihany, tsy aleo ve handeha ho hita eo izay tohiny?
Rehefa lasa ny vahiny, tohizana indray ny ady. Na tsia…